I-Winning Combo Yomkhiqizo, Ukukhetha, Nemizwelo | Martech Zone
NgoMgqibelo, July 17, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
The Ijellyvision Lab ubeke i-eBook encane emangalisayo yokuthi Ungaletha Kanjani Izinketho Zomkhiqizo. I-ebook iqhathanisa isimilo sabathengi ezitolo ezinkulu nalabo abakwi-intanethi futhi inikeza nobufakazi bokuthi ukuziphatha kuyafana.
Ungase ucabange ukuthi isitolo esikhulu sikhulu kakhulu, kepha iJellyvision isikhumbuza ukuthi kunesikhala esingapheli kuwebhu, nokuthi uyethula kanjani imikhiqizo nezinsizakalo zakho kungenza umehluko. Nazi izifundo ozifundile (okuqukethwe okucashuniwe nokuchazwe ngamagama kusuka ku-eBook):
Imikhiqizo Engaphezulu, Amakhasimende Ajabulayo - Uma uzama ukuba nesayithi elijabulisa wonke umuntu, uzokwakha into engathandwa muntu. Dala izingxenye ezahlukahlukene ukuze uthandwe yisegmenti ngayinye. Imakethe umkhiqizo ofanele kumakhasimende afanele. Isisetshenziswa: I-Ketchup Conundrum.
Kodwa… Izinketho eziningi, Ukuthengisa okumbalwa - Ukukhetha okuningi ekhasini elilodwa kuzodida izivakashi bese zihamba. Banikeze ngezigaba nezihlungi ukuze bakwazi ukufihla lokho abangakudingi.
Akukho Mzwelo, Azikho Izinqumo - Ngaphandle kwemizwa, ubuchopho buhlaziya futhi buqhathanise, buhlaziye buqhathanise, buhlaziye buqhathanise ngaphandle kokuthola isiphetho ukungabi nandaba kokugula. Imizwelo yilokho okunika amandla okunquma phakathi kwezinketho ezahlukahlukene.
I-eBook iya emininingwaneni eminingi futhi ibuyisa zonke iziphetho ndawonye. Yilande lapho uthola ithuba futhi uqiniseke ukuthi ulandela ibhulogi yeJellyvision, Ingxoxo.
USteve Jobs: Bayeke Badle Icala!
Jul 19, 2010 ku-10: 34 AM
Ukungabi ngumlandeli weKetchup ngithole I-Ketchup Conundrum ifundeka ngokumangazayo. Kubukeka sengathi kunesifundo sokumaketha lapho kwenye indawo.